Kungani uNkulunkulu enza umsebenzi omusha enkathini ngayinye? Kungenxa yaziphi izizathu ngempela ukuba nenkathi entsha? | IVANGELI LOKUFIKA KOMBUSO
kwesithi “Iqiniso Mayelana Nomsebenzi Enkathini Yokuhlengwa” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyamen
Umsebenzi kaNkulunkulu uyaqhubeka nokuthuthuka, futhi nakuba inhloso yomsebenzi Wakhe ingaguquki, izindlela asebenza ngazo ziyaguquguquka njalo, kanjalo nangalabo abalandela uNkulunkulu. Ubuningi bomsebenzi kaNkulunkulu, busho ukuthi abantu sebemazi kahle uNkulunkulu, nesimo somuntu siguquka ngokuhambisana nomsebenzi Wakhe. …
kwesithi “Imfihlakalo Yokuba Senyameni (4)” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyamen
UNkulunkulu uqobo Lwakhe uza ukuzovula inkathi futhi uNkulunkulu uqobo Lwakhe uza ukuzoqeda inkathi. Umuntu akakwazi ukwenza umsebenzi wokuqala inkathi nokuphetha inkathi. Ukuba uJesu akazange afikise umsebenzi kaJehova ekupheleni, lokho-ke kwakuyoba ubufakazi bokuthi wayengumuntu nje futhi engakwazi ukumela uNkulunkulu. Ngenxa kanye yokuthi uJesu weza waphetha umsebenzi kaJehova, walandela emsebenzini kaJehova ngokuqala umsebenzi Wakhe, umsebenzi omusha, kubonisa ukuthi lokhu kwakuyinkathi entsha nokuthi uJesu wayenguNkulunkulu uqobo. Benza izigaba zomsebenzi ezehlukene ngokucacile. Esinye isigaba sasenziwa ethempelini, kanti esinye sasenziwa ngaphandle kwalo. Omunye wale misebenzi wawungukuhola abantu ngendlela yomthetho kanti omunye wawungukunikela umnikelo wesono. Zombili lezi zigaba zomsebenzi zazehlukene ngokusobala; lokhu kwehlukanisa inkathi entsha kwendala, futhi kuliqiniso elimsulwa ukuthi ziyizinkathi ezimbili ezehlukene. Indawo yomsebenzi Wabo yayehlukene futhi umongo womsebenzi Wabo wawehlukene futhi nezinhloso zomsebenzi Wabo zazehlukene. Ngakho, zingahlukaniswa zibe yizinkathi ezimbili: ITestamente Elisha neTestamente Elidala, okuwukuthi, inkathi entsha nendala. Lapho uJesu efika akangenanga ethempelini, okufakazela ukuthi inkathi kaJehova yayisiphelile. Akangenanga ethempelini ngoba umsebenzi kaJehova ethempelini wawusuphelile, futhi wawungasadingi ukuphinde wenziwe, futhi ukuwenza futhi kwakuyoba ukuwuphinda. Kwaba ngokushiya ithempeli, ukuqala umsebenzi omusha kanye nokuvula indlela entsha ngaphandle kwethempeli, lapho akwazi khona ukufikisa umsebenzi kaNkulunkulu esicongweni sawo. Ukuba akaphumanga ethempelini ukuyokwenza umsebenzi Wakhe, umsebenzi kaNkulunkulu wawuyoma ndawonye ezisekelweni zethempeli, futhi kwakungeke kube nezinguquko ezintsha. Ngakho, lapho uJesu efika akangenanga ethempelini, futhi akenzanga umsebenzi Wakhe phakathi ethempelini. Wenza umsebenzi Wakhe ngaphandle kwethempeli, futhi, ehola abafundi, wenza umsebenzi Wakhe ngokukhululeka. Ukuhamba kukaNkulunkulu ethempelini ukuyokwenza umsebenzi Wakhe kwasho ukuthi uNkulunkulu wayenohlelo olusha. Umsebenzi wakhe wawuzokwenziwa ngaphandle kwethempeli, futhi kwakuzoba umsebenzi omusha owawungeke ubambeke endleleni yokwenziwa kwawo. Eqeda nje ukufika uJesu, waqeda umsebenzi kaNkulunkulu wangesikhathi seTestamente Elidala. Nakuba zazibizwa ngamagama amabili angafani, kwaba nguMoya owodwa owafeza zombili lezi zigaba zomsebenzi, futhi nomsebenzi owawenziwa wawuqhubeka njalo Njengoba igama lalehlukile, nokuqukethwe umsebenzi kwakwehlukile, inkathi yayihlukile. Lapho uJehova efika, leyo kwakuyinkathi kaJehova nalapho uJesu efika, leyo kwakuyinkathi kaJesu. Ngakho, isikhathi ngasinye lapho lowo nalowo efika, uNkulunkulu ubizwa ngegama elilodwa, umela inkathi eyodwa futhi uvula indlela entsha, athathe igama elisha, okubonisa ukuthi uNkulunkulu uhlala emusha futhi akagugi, okuwukuthi umsebenzi Wakhe awuyeki ukuqhubekela phambili. Umlando uhlala uqhubekela phambili nomsebenzi kaNkulunkulu uhlala uqhubekela phambili. Ukuze uhlelo lweminyaka eziyinkulungwane eziyisithupha lufinyelele esiphethweni, kumele luhlale luqhubeka luya phambili. Usuku nosuku, kufanele enze umsebenzi omusha, unyaka nonyaka kumele enze umsebenzi omusha; kumele aqale izindlela ezintsha, kumele aqale izinkathi ezintsha, aqale umsebenzi omusha nomkhulu, futhi kanye nalokhu alethe amagama amasha nomsebenzi omusha. Ukusuka emzuzwini kuya emzuzwini, uMoya kaNkulunkulu wenza umsebenzi omusha, ungabambeleli ezindleleni nasemithethweni emidala. Futhi umsebenzi Wakhe awukaze ume, kodwa uyenzeka ngomzuzu nomzuzu owedlulayo.
Okwedlule：Ihlelo ngalinye phakathi komhlaba wenkolo likholwa ukuthi indlela yalo yindlela yeqiniso, ngakho umuntu angayehlukanisa kanjani indlela yeqiniso ezindleleni zamanga?
Okulandelayo：Umphakathi wenkolo waqala ukumelana noKristu esenyameni eNkathini Yomusa, ngakho kungani uKristu ehlala engamukelwa futhi elahlwa umphakathi wenkolo?
UNkulunkulu Wengamela Phezu Kwesiphetho Sesintu Sonke Phakathi Kwenhlekelele, Ngabona Isandla SikaNkulunkulu Ngaphandle Kwensindiso KaNkulunkulu, Ngabe Angikho Lapha Namhlanje Uma uNyazi lwaseMpumalanga luyindlela yeqiniso, kungani uhulumeni we-CCP njalo ucindezela kanzima, ubopha, futhi ushushisa ngokumelene noNyazi lwaseMpumalanga?